Cudurrada galmada la isku qaadsiiyo (STDs) waxay u faafayaan sida Dabka Maraykanka oo kale - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Cudurrada galmada la isku qaadsiiyo
In kasta oo tobannaan sano oo ah barashada galmada iyo ololaha wacyigelinta STD, tirada kiisaska cusub ee la soo sheegey ee STI ay sii kordhayaan. Wargeys cusub CDC waxay sawiraysaa sawir qafiif ah oo ku saabsan caafimaadka galmada ee Mareykanka, iyadoo cudurrada qaarkood ay gaarayaan heerar aan weligood la arkin ku dhawaad ​​20 sano qaar kalena ay gaareen heer sare oo rikoor ah.
Warbixinta CDC waxay ku saleysan tahay xogta laga soo qaatay 2017 illaa 2018 waxayna muujineysaa tiro naxdin leh oo ah kiisaska waraabowga, jabtada iyo kalamiidiya ee dalka oo dhan. Xogtu waxay shaaca ka qaadday in ka badan 115 000 kiisaska waraabowga inta lagu jiro muddadan iyo in ka badan 580 000 kiisaska jabtada, midkoodna ma gaarin heerarkan oo kale tan iyo 1991. Chlamydia? Waa sheeko ka duwan.
Marka loo eego CDC, kororka qiyaastii 3% ee kiisaska chlamydia ee waddanka oo dhan waxay tirada guud ka dhigaysaa in kabadan 1,7 milyan, heerka ugu sarreeya weligiis la duubay.
Syphilis wuxuu ku dhacay guulaha ugu badan. Kordhinta 3% ee kalamiidiya iyo kororka 5% ee jabtada waa labadaba cirro marka loo eego kororka cajiibka ah ee 14% loo arkay cudurka waraabowga. Xitaa ka sii daraya, heerka qiyaasta infakshannada waraabowga carruurta dhasha ah ayaa ku booday 40% sanadkii hore.
Ilmaha yaryar ee ku bukooda waraabowga hooyadood halis weyn ayey ku yihiin. Dhalashada iyo geerida dhaladu waa qatar sharci ah oo loogu talagalay haweenka uurka leh ee waraabowga leh iyo, xitaa haddii ilmuhu sii noolaado, waxay la kulmi karaan dhibaatooyin koriimo oo daran.
MD ayaa sharxaya. "Baadhitaanadu waa sahlan yihiin waxayna haweenka ka caawin karaan inay ka ilaaliyaan ilmahooda cudurka waraabowga - oo ah cudur laga hortagi karo oo yeelan kara cawaaqib xumo."
CDC waxaay iftiimineysaa dhowr waxyaabood oo hurinaya kor u kaca STDs, marka lagu daro yareynta isticmaalka kondhomka dhalinyarada. Isku darka qodobada halista ah sida isticmaalka daroogada iyo saboolnimada, iyo sidoo kale yareynta barnaamijyada wacyigelinta STD ee gobolka iyo heerarka maxalliga ah ee Mareykanka, oo waxaad helaysaa iskumar si aad u heshid tirada rikoorka ah MTS.
Dhawaan la helay ayaa soosaaray gaaska 'cyanide gas' - BGR